တစ်ခါတစ်ရံအမှတ်တကယ်ရှိပါတယ်ကောင်းသောအဘယ်အရာကိုဒုစရိုက် ပတ်သက်. ဘာသာရပ်ရှုပ်ထွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအကြိမ်ကလူတစ်ဦးကယ့်ကိုပထမဦးဆုံးရာအရပျ၌ရှိကြ၏ကောင်းသောအဘယ်အရာကိုဒုစရိုက်နားလည်နိုင်လျှင်ရိုးရှင်းစွာကြည့်ဖို့ပါပဲ။ ဘုရားသခငျသညျသွေးဆောင်ပြုစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်စာတနျသညျဤတာဝန်ပေးထားနိုင်ပါသည်။
များလွန်းမကြာခဏသျောအခြားသူတစ်ဦးသွေးဆောင်မှု၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်နေသည်။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ကွယ်ပျောက်ဘုရားသခင်ထံမှထို့ကြောင့်ဖွင့်ဖို့သွေးဆောင်မှု၏ရင်းမြစ်များကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှါရှာကြံလေ၏အဖြစ်ဥပမာ, အခြားအမြိုးအနှယျကိုမြင်တော်မူ၏။ အချိန်များတွင်ခရစ်ယာန်တွေအတွက်ဥပမာအားဖြင့်, သွေးဆောင်မှု၏သတင်းရင်းမြစ်အဖြစ် Non-ခရစ်ယာန်တွေကိုမွငျလြှငျ ရူးဆိတ်စစ်ပွဲများ , သို့မဟုတ် Inquisition ။
သွေးဆောင်မှုကိုအများစုသမ္မာကျမ်းစာနမူနာလူသားမြားသညျပါဝင်ပေမယ့်, ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းကြ၏သောအခါကြိမ်ရှိပါတယ်။ ဣသရေလအမျိုး၏ရန်သူများ, ဥပမာ, မိမိရွေးချယ်သောလူများအပေါ်သူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဘို့ထိုသူတို့အပြစ်ပေးဖို့ဘုရားသခငျသညျကိုစိန်ခေါ်။ ယေရှုက "စမ်းသပ်" ရန်ငြင်းဆန်သို့မဟုတ်ဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်ယာန်များကိုမလျော်ကန်သောအကငျြ့မြားတှငျပါဝငျခွငျးအားဖွငျ့ဘုရားသခငျကိုစမ်းသပ်ဖို့မအကြံပြုစုံစမျး။
ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာရှိရာအချို့သောဖြစ်ရပ်ဆံ့မ နျစာတနျ ပင်မိမိအထောက်ပံ့သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ကျမ်းစာလာသည်ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုသုံးပြီး, ယရှေုကိုစုံစမျးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
စာတနျကကဲ့ရဲ့ သညျယရှေု , သူ့ကိုပြောပြ, "သင်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်လျှင်, မုန့်ဖြစ်လာဖို့ဤကျောက်မှာထား၏။ " ယရှေုသညျလူကိုမုနျ့အားဖြင့်အသက်ရှင်တော်မမူကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
စာတန်ကလည်းတက်သညျယရှေုကို ယူ. ထိုလူအပေါင်းတို့သည်မာရ်နတ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိကြ၏ဟုကမ္ဘာ၏တိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကိုပြသခဲ့သည်။ သူသညျယရှေုကိုဆင်းလဲသူ့ကိုကိုးကွယ်ကြ၏မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသူတို့ကိုပေးရသညျယရှေုကတိပြုခဲ့သည်။
တစျဖနျယရှေုသညျကမျြးစာမှကိုးကား: "သင်သင်တို့၏ဘုရားသခင်နှင့်သူ့ကိုသာသင်အစေခံကြလိမ့်မည်သခင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရ။ " (တရားဟောရာ 6:13)
စာတနျကိုယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောဗိမာန်တော်အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုသူ့ကိုတာ, ယရှေုသညျတတိယအကြိမ်စုံစမျးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူဟာဗိမာနျတျော၏ထိပ်ကနေခုန်ဖို့ကြိုးစားလျှင်ကောင်းကင်တမန်တို့သညျယရှေုကိုကယ်တင်မယ်လို့သတိပြုဆာလံ 91 misquoted ။ ဒါပေမဲ့ယေရှုတရားဟောရာ 6:16 အတူ replied: "သင်ကစမ်းသပ်ဖို့သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုမထားရကြမည်။ "
သွေးဆောင်မှုကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးကိုရှိပြီးသိပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တို့မှရှောင်ဖယ်မရသင့်သောခရစ်ယာန်ထုံးတမ်းစဉ်လာများတွင်အငြင်းပွားမှုများရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမသွေးဆောင်မှုလည်းမရှိလျှင်, သွေးဆောင်မှုကိုကျော်လွှားနှင့်အားဖြင့်တဦးတည်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ရန်မအခွင့်အလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ ၏အလေ့အကျင့်အတွက်တန်ဖိုးသည်အဘယ်မှာရှိ အိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်း တဦးတည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှမဆိုသွေးဆောင်တွေ့ကြုံဘယ်တော့မှလျှင်ကက်သလစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်အားဖြင့်ဥပမာ,?
အပြစ်သွေးဆောင်ရာရုန်းကန်နေနှင့်ကျော်လွှားအားဖြင့်, သင်သည် Self-တိုးတက်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်နေခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ယေဇဗေလတစ်မိဖုရားဆိုးအဖြစ်လူသိများငှါ လာ. မည်သို့
Boolavogue Lyrics နှင့်သမိုင်း
ပရိုဖိုင်းကို: အဆိုပါ Big Bopper
ပုဂ္ဂလိကအထက်တန်းကျောင်းတက်ရောက်မယ့်5အကြောင်းရင်းများ
ဝါး, Soul နှင့်
စိန့် Roche, Dogs ကိုနာယကစိန့်
တစ်ဒိုင်အိုကလစ်လျှံ Window ဆိုတာဘာလဲ
ထိပ်တန်းအဝေးသင်သင်ယူ Conferences က
အကောက်ခွန်, ရိုးရာနှင့် Litha ၏ Folklore
အဆိုပါ Big Dipper
ဆိုးသောသန်းနောက်ထပ်အံ့မခန်းဖြစ်ကြဒါက 8 သဘာဝငှက်ဥ
DNA ကိုအဓိပ္ပာယ်: Shape, ပွားများနှင့် mutation
ဒုတိယအ conjugation အီတလီကြိယာ
ယောဟန်သည်အဒမ် '' နောက်ဆုံးစကားကဘာလဲသလော
အဆိုပါ '' Do မမိုက်ခရိုဝေ့ '' စာရင်း